सीसीटीभीमा कैद भयो खतरनाक सडक दुर्घटना (भिडियो)
काठमाडाैं | मंसिर १४, २०७८
भारतको पंजाब राज्यको खरडमा तीव्र गतिमा गुडिरहेको एक कारले डिभाइडरमा उभिएका दुई मानिसलाई ठोकेको खतरनाक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
कारको गति तीव्र हुनाले दुवै युवकलाई लगभग १० फीटसम्म उफारेर सडकपारि फालेको थियो । कार स्ट्रीट लाइटको पोललाई भत्काउँदै कैयौं फीटसम्म घिस्रिँदै गएको थियो ।
दुर्घटनामा चारजनाको मृत्यु भएको छ र कैयौं मानिस घाइते छन् ।
खरड लुधियाना हाइवेमा मर्नेमा बाटोमा रहेका दुई र कारमा रहेका दुईजना छन् ।
आइतवार साढे दुई बजे घटना भएको हो ।
लगभग १२ चोटि पल्टा खाएर कार रोकिएको थियो । त्यो फूटओभर ब्रिजमा पनि ठोकिएको थियो ।
हाईवे पार गर्नका लागि डिभाइडरको बीचमा उभिएका सुरन्दिर सिंह छिन्दा र जमील खानले अनियन्त्रित कार देखेका थिए । उनीहरू बच्नका लागि अलिकति पछि हटेका पनि थिए । तर कारले उनीहरूलाई उडाइदियो ।
दुवैजनाको मृत्यु घटनास्थलमै भएको थियो ।
कारमा पाँचजना युवक थिए । कारचालक संजीत कुमारको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ । विक्रमजीतको चण्डीगढ अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भयो । राहुल यादव र अंकुश तथा अन्य एक युवक घाइते छन् ।
क्षतिग्रस्त कारमा रक्सीका बोतलहरू भेटिएका छन् ।
भिडियो हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला :
राकाथुम हत्याकाण्ड: १२ वर्षपछि अभियुक्त पक्राउ
मंसिर १४, २०७८
जब विवाह समारोहमै युवतीले बेहुला बदलिन्...
तमिलनाडुमा एक दुल्हाले विवाह समारोहमा नाच भइरहँदा आफ्नी दुलहीलाई थप्पड मारे । यसले बेहुली निकै दुःखी बनिन् र विवाह नै तोडिदिइन् । बेहुला र बेहुली नाचिरहेको समयमा बेहुलाको एक भाइ त्यहाँ ...
६७ वर्षदेखि कहिल्यै ननुहाएका यी व्यक्ति, कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ?
मान्छेले स्वस्थ रहन व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव चिकित्सकले दिन्छन् । व्यक्तिगत सरसफाईमा नियमित स्नान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । डेली स्टारमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार ईरानका अमो जाजीले ६७ वर्षदेखि कहिल्यै नुहाए...
यी आतंककारीले १५ वर्ष जेलमा रहेकै बेला जन्माए ४ बच्चा !
जेलमा रहेका व्यक्तिले बच्चा जन्माएको कुरा पत्यार लाग्दैन । तर इजरायलीको जेलमा १५ वर्ष रहेका एक आतंककारीले आफूले ४ बच्चा जन्माएको दाबी गरेका छन् । डेली स्टारमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार प्यालेस्टाइनी आतंककारी रफत&...
टोंगामा ज्वालामुखी विस्फोटपछि आएको सुनामीमा २७ घन्टा पौडेर बाँचे अपांग (भिडियो)
प्रशान्त महासागरमा रहेको मुलुक टोंगामा समुद्रमुनि ज्वालामुखी विस्फोट भएपछि सुनामी आएको छ । त्यसले गर्दा आएको लहरमा परेका एक अपांग व्यक्तिले २७ घन्टा पौडेर ज्यान जोगाएका छन् । राम्ररी हिँडडुल गर्न नसक्ने ...
सेल्फी बेचेरै यी व्यक्ति बने करोडपति
इन्डोनेसियाका २२ वर्षे युवक सेल्फी बेचेरै करोडपति बनेका छन् । सुल्तान गुस्ताफ अल गोजाली नामक यी युवक कम्प्युटर साइन्स पढिरहेका छन् । उनले सेल्फी बेचेरै ११ करोडभन्दा बढी रकम कमाइसकेका छन् । गोज...
एकजना यात्रीले मास्क नलगाएपछि डेढ घन्टा उडेर फर्कियो विमान (भिडियो)
अमेरिकाको मायामीबाट लन्डन गइरहेको एक विमान डेढ घन्टा उडेर फर्किएको छ । विमानमा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने सरकारी आदेश उल्लंघन गर्ने एक यात्रीका कारण विमान फर्केको हो । उडान रद्द गरेर एयरलाइन्स कम्पनीले...
हिन्दुराष्ट्रको मागबारे कमल थापाको कडा टिप्पणी, के भने ?
मैदानमा आए वर्षमान, को बन्ला माओवादीको महासचिव ?
९ मिनेट अघि
१८ वर्षपछि देखिए लक्ष्मण सारस
लोकमार्गले बदल्यो दुर्गमको परिचय
३८ मिनेट अघि
युक्रेन तनावमा ट्विस्ट : रुसविरुद्ध खनिएको अमेरिकालाई जर्मनी र फ्रान्सले किन पारे निराश ?